ny tsiambaratelo fantatr’i Ralitera no nampigadra azy nandritra ny 2 taona sy 3 volana izay – MyDago.com aime Madagascar
ny tsiambaratelo fantatr’i Ralitera no nampigadra azy nandritra ny 2 taona sy 3 volana izay
Ireto entinay aminao ireto ny tatitry ny kabary tetsy amin’ny Magro Behoririka tamin’ity Alarobia 10 Aogostra 2011 :
Ignace :tsy misy fahafahana miteny sy maneho hevitra intsony eto Madagasikara fa izay maneho izany dia handefasana herim-pamoretana toy ny tetsy amin’ny ladoany androany.
Ny mahavariana eto dia rehefa ny hafa no manao dia enjehina fa rehefa ny sasany dia ekena : mangina ny vahoaka sy ny tafika nefa tena amidy ambongadiny ny tany ankehitriny ary manamboninahitra mihitsy no mivoratra tany
‘Retour à l’ordre constitutionnelle’, hono, ny fifidianana. Tsia avy hatrany no valiny indrindra fa ireo no mikarakara ary faharoa fifidianana ben’ny tanana. Tetezamita iombonana no fiverenana amin’ny ara-dalana.Marinaireny tenin’i Honoré Rakotomanana ireny, hoy izy : misafotofoto ny lalàna rehetra momba ny fifidianana. Tsy misy ilaina ny FAT intsony izay mpamono fitokonana ihany no hainy.
Tsianihy :ny ministry ny vola no nampandefa emmoreg tao Antanimena tao amin’ny ladoany noho ny fatahorana fa hiaraka amin’ny magro. Magro dia hampina tafika, tsy ampina tafika ary efa ho tsara fandraisana ny fodian’ny filoha Ravalomanana. Raha mbola mitondra i Andry na inona na inona no hentiny dia tsy hisy zavatra matotra mihitsy eto amin’ny firenena. Izao dia hoe ho saziana ny mpianatra any amin’ny oniversite any Toliary rehefatonga any ny ministry ny fampianarana. Tranga efa niseho teto amin’ny firenena izany ary ny fitondrana nanao izany dia efa amoron-tevana.
Dominique : elargissement no tadiavin’ny CST syny CT hitazomanana ny toerany, tsy afaka ho namany ny rodoben’ny malagasy izay efa mahafatra ny fanirin’ny sasany ho mpanotsaina, ho assistant na ho membre mihitsy.
Mandiniha ihany ry foza fa rehefa ilain’i Andry ihany ianareo no antsoiny rehefa mila fa izy dia mamorina assises, conférence nationale, referendoma…ary miantso vahoaka izy rehefa mila sorona 07 febroary. Fa rehefa tsy ilainy dia adinony.
Ramy :ny vahiny no mitantana ny firenena. Efa ela i Total no nilaza fa hiala eto Madagasikara kanefa mbola io ary mitrandraka mafy ary tsy mipaika amin’ny vahoaka ny vidin’ny haren’ny malagasy fa lasa any ivelany.
Apahany ihany koa no alohan’ny frantsay sy karana amin’ny hetra satria izy ireo no nanampy tamin’ny fanon-ganam-panjakana.
Ankoatra ireo dia mbola maro be ny antony tsy maintsy handrodanana an’i Andry sy ny namany ka ny vahaolana dia fodian’i Dada ihany. Tsy ilaina ny miara mitantana miaraka amin’I Andry.
Jean Louis Rakotoamboa :ny tsiambaratelo fantatr’i Ralitera no nampigadra azy nandritra ny 2 taona sy 3 volana izay. Miray tsikombakoba amin’ny FAT ny prezidan’ny HCC ankehitriny ary fahatahorana any i Ralitera noho tsy nanafihan’ny Capsat ny HCC. Rehefa nanao pression t amin’ny HCC i Mme Ihanta sy ny vehivavy dia nopaigorina ny vadiny dia nalefa any amin’ny Ralitera daholo ny rihitra rehetra. Tsy hihemboatra amin’ny fijoroany na i Ihanta na i Ralitera na dia alefa any am-ponja ary ny olona mijoro amin’ny marina. Mila hotronitsika i Ralitera rahampitso.
Rodin : noana loatra ny FAT ka dia mihinana mafy ka dia mitaraina ny Jirama, be loatra ny mivoaka nefa kely loatra ny miditra. Nendahana ny vy any ny koperativa, lasa ireo omby 14. Fa fananam-panjakana angaha ireny ?
Manasa antsika rehetra i Imerintsiantosika amin’ny zoma ao amin’ny kianja fanoavana fampisehoana.
Guy Maxime :vavolombelona amin’ireny taratasy novakian’i Rakotoamboa ireny ny tenako satria dia niray trano t amin’ny Ralitera aho tany am-ponja. Coup d’Etat ny t amin’ny 2009.
Izao dia hanao atrikasa momba ny demokrasia i Yves Aimé Rakotoarison, sokafy aloha i Ambohijatovo raha iresaka demokrasia.
Homany dieny izao ny entana ry Mialy Rajoelina fa mila fotoana ny fifidrana monina satria tsy ilaina ny vahoaka malagasy ho filoha i Andry ary vao an-dalana i Ravalomanana dia dila i Andry.
Inona no atahorana ny fitokonan’ny ladoany ? Anarana hivoaka ? Hidio ny tanana fa ho reraka hiazakazaka hamoho trano eo ny emmoreg.
Manoela :ho hita eo indray ny fahendren’ny fitsarana rahampitso, hanao ny marina sa hanao zavatra hafa indray. Dia mbola milamina dia avoahay ireny olona rehetra ireny fa madio tanana.
Mazava amin’ny ireny taratasy novakian’i Rakotoamboa ireny fa tsy nanao démission i Ravalomanana.
Zafilahy :niheritreritra ny FAT sy ny mpomba azy fa rehefa potehana ny fananan’i R8, hampitahorina sy las aizy dia ho tapitra ny tantarany. Diso ilay kajy.
Mahafantatra ny ataony ny ladoany ary olona nofanina manokana ireny, matoa ireny mitokana dia misy tsy rariny ao nefa dia handefasana emmoreg nefa dia demokrasia no dradradradraina hatrany. Hamafisin’Andriamanitra mihitsy ny fon’ireo.
Ho hita eo indray ny hataon’ny fitsarana fa izahay efa nandalo teo amin’ny izany fitsarana izany sy fanandihadiana izany. Baiko mitotona io.
Sao dia efa ampy izay fitiavan-tena izay ry mpanao politika ? Convocation hanao fanadianana ary nge tsy azon’ny mpianatra satria tsy nahaloha ecolage e ! Ahoana no terena hitondra vokatra ny atleta nefa ny sakofo aza tsy zarizary ? Mila manambatra hery isika fa tsy afaka intsony io Andry io ary ny faritra efa mahatsapa fa ny mpanao politika afaka hamerina syhanatsara dia tsy misy afatsy i Dada.
Mektoub :sady mampalahelo no mahasorena ny raharaha vaches laitières. Ordre de mission avy amin’ny lehiben’ny CST sy commission ary ny ordre tsy misy hafa tsy avy amin’ny fitsarana ary homena any i Ramarosahanina.
Ny heloka i Ralitera dia mitovy amin’ny helok’i Raoelina, manamboninahitra tsy nivadika t amin’ny Ravalo na dia tambazana aza. Tsy fanohanana olona fotsiny koa no ataotsika eto fa ny fijoroana amin »ny marina. Tsy kabary sy teny fotsiny no eto.
Azo isaina amin’ny tanana ny victime ny 07 febroary AV7 fa ny victimes ny coup d’Etat 2009 aman-tapitra isa. Inona io fahanginana takian’ny AV7 io, maninona tsy nitory fa i Ravalomanana indray ity no mangataka fanadihadina iraisam-pirenena ? Noho ny zavatra rehetra mitranga dia tsy mety ny fiarahana mitantana
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 août 2011 10 août 2011 Catégories Politique
Précédent Article précédent : Niray petsapetsa tamin’ny fanonganam-panjakana ny HCC ?
Suivant Article suivant : Pas d’élection cette année selon la SADC